डन्डीफोर आएर हैरान भएको छ..? मात्र १ दिनमा डन्डीफोर र दाग हटाउने बिशेष तरिका जानी राखौ.. ~ FMS News Info
डन्डीफोर आएर हैरान भएको छ..? मात्र १ दिनमा डन्डीफोर र दाग हटाउने बिशेष तरिका जानी राखौ..
सुन्दर र चम्किलो छालाको चाहना हरेक महिलालाई हुन्छ। तर, अनुहारमा आउने डन्डीफोरले तपाईंको सुन्दरतामा दाग लगाइदिन्छ। डन्डीफोर छिटै निको पनि हुँदैन। केही घरेलु उपाय अपनाएर डन्डीफोरबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
डन्डीफोरको समस्याबाट राहत दिलाउन ल्वाङ गुणकारी छ। यसका पाउडर वा पेस्ट बनाएर अथवा यसको तेललाई डन्डीफोर भएको ठाउँमा लगाए फायदा हुन्छ। एक कप पानीमा ल्वाङ उमाल्ने। पानी चिसो भएपछि त्यसमा भएका ल्वाङलाई मुछ्ने र अनुहारमा डन्डीफोर भएको ठाउँमा लगाउने। आधी घण्टासम्म राख्ने। सुखेपछि चिसो पानीले अनुहार धुने। यसो गर्दा डन्डीफोर हटेर जान्छन्।
धेरै कम मानिसलाई थाहा छ कि महले अनुहारमा भएका डन्डीफोरलाई हटाउने काम गर्छ। डन्डीफोर भएको भागमा मह दलेर केही बेर राख्ने। १५ मिनेटपछि चिसो पानीले धुने। चिसो दूधले पनि अनुहार धुन सकिन्छ। यसले डन्डीफोरको समस्याबाट छुटकारा त दिलाउँछ नै तपाईंको छाला चम्किलो पनि बनाउँछ।
गोलभेँडामा पाइने तत्व छालाका लागि लाभकारी हुन्छन्। गोलभेँडामा पनि कागतीजस्तै धेरै फाइदाजनक तत्व पाइन्छन् जसले डन्डीफोर हटाउन मद्दत गर्छन् र छालालाई चम्किलो बनाउँछन्। गोलभेँडाको रस अनुहारको छालाभित्रैसम्म पुग्ने गरी लगाउनुपर्छ। आधी घण्टा अनुहारमा राखेर चिसो पानीले पखाल्दा यसले छिट्टै फाइदा दिन्छ।
चन्दन पाउडरबाट पनि डन्डीफोर हटाउन सकिन्छ। बेसनमा अलिकति दही, चन्दन पाउडर र कागतीको रस मिसाउने। डन्डीफोर भएको भागमा यो पेस्ट दल्ने। कागती केही थोपामात्रै राख्ने। धेरै राख्न यसले पोल्न सक्छ। यो हुँदा दहीको मात्रा बढी राख्न सकिन्छ। सुखेपछि चिसो पानीले अनुहार धुने। र, डन्डीफोरबाट छुटकारा पाउने।